Vision / Mission / Objective | Myanmar Edible Oil Millers Association ( MEOMA )
Division & State Braches
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးလာစေပြီး ပြည်တွင်းဆီစက်များ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းကာ ပြည်တွင်းဆီဖူလုံမှုမှသည် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့တင်ပို့နိုင်ရန်။
– လယ်ယာကဏ္ဍ၊ ဆီထွက်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး တောင်သူများအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်။
– ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံ အရည်အသွေးပြည့်မီရေး လယ်ယာကဏ္ဍမှ စားသုံးသူအထိ ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ခေတ်မီစက်ကိရိယာနှင့် နည်းပညာများ ရှာဖွေဖြစ်ထွန်းလာစေရန်။
– ပြည်တွင်းဆီစက်များမှ အရည်အသွေးပြည့်မီသော စားသုံးဆီများကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်သာမက ပြည်ပ ဈေးကွက်ထိအောင် ထိုးဖောက်နိုင်ရန်။
– စားသုံးသူများ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ပြီး အရည်အသွေးမီစားသုံးဆီများ စားသုံးရန်။
– ကျန်းမာရေးအရ စားသုံးဆီကြောင့်ဖြစ်သော ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန FDA တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ စားသုံးသူများအား အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်။
– ဆီစက်များ၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်း ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်စသည်များမှ မွေးမြူရေးကဏ္ဍဆက်စပ်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်။
(က) လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ (ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး) ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး တောင်သူ လယ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားပိုမို ဖြစ်ထွန်းစေရန်။
(ခ) စက်မှုကဏ္ဍ (ဆီစက်များ၊ မျိုးစေ့ထုတ်စက်၊ အခြောက်ခံစက်၊ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်၊ သန့်စင်စက်၊ ခေတ်မီသိုလှောင်ရန် Silo များနှင့် မွေးမြူရေးအစာစပ်စက်ရုံ) များ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။
(ဂ) ပြည်တွင်းဆီစက်လုပ်ငန်းများက အရည်အသွေးအဆင့်မီစွာ ထုတ်လုပ်ထားသော မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပုပ်ဆီ (ပဲပိစပ်ဆီ)၊ ပန်းနှမ်းဆီ စသည့် -စားသုံးဆီများကို ပြည်တွင်း ဈေးကွက်တွင် သာမက ပြည်ပဈေးကွက်တိုင်အောင် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ထိုးဖောက်အခြေချမိစေရန်။
(ဃ) စားသုံးသူကဏ္ဍ (ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် အပြင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သော ပြည်တွင်းထုတ် ဆီကောင်း၊ ဆီသန့်များ) ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာပိုမို အလေးထား ၀ယ်ယူသုံးစွဲလာစေရန်။
(င)ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စားသုံးဆီကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော ကောင်းကျိုး/ဆိုးပြစ်များကို ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန(FDA) တို့နှင့်အတူတကွပူးပေါင်း၍ ပြည်သူထံသို့ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ထဲထဲဝင်ဝင်စဉ်ဆက်မပျက် ဆောင်ရွက်ရန်။
(စ)မွေးမြူရေးကဏ္ဍ (အဓိကအစာကုန်ကြမ်းဖြစ်သောပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်၊ နေကြာဖတ်၊ ပဲပုပ်ဖတ်၊ ပန်းနှမ်းဖတ်စသည့် ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ နို့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။
(ဆ) ပြည်တွင်းစားသုံးမှု ဖူလုံပြီး (သွင်းကုန်အစားထိုး၊ ပို့ကုန်ကဏ္ဍ) တိုးတက်မြင့်မားစေရန်။
(ဇ) မျိုး၊ နည်းပညာ စက်ကိရိယာများ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ခေတ်မီ ဓာတ်ခွဲခန်းများ အသုံးပြုလာနိုင်သည်အထိ ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးသူများနှင့်၊ ဆီစက်ပိုင်ရှင်များကို အသိပညာပေး စည်းရုံးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဈ) ဆီစက်လုပ်ငန်းများ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား အထောက်အကူပြုရန်။
(ည) ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကို အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးမည့် အကျိုးအမြတ်ဝေခြင်း မပြုသော (အစိုးရမဟုတ်သည့်) အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အစဉ်အမြဲရပ်တည်ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဋ) မြန်မာနိုင်ငံဆီစက်လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ အကူအညီပေးနိုင်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ ပြည်တွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
(ဌ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို အသင်း၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အမြန်ဆုံးဝိုင်းဝန်ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်။
The main objectives of the Myanmar Edible Oil Millers Association are:
(a) To have more economic development of the farmers having modernized development of the agriculture sector (Oil Crop Plantation)
(b) To have modernized development of the Industrial Sector (Oil Mills, Seed Production Mill, Drying Machine, Harvesting and Threshing Machine, Cleaning Machine, Silos to make modernized storage and Animal husbandry food mixing plants).
(c) To have stepping down foundation penetrating effectively untill foreign market not only at the domestic market to the peanut oil, Sesame Oil, Sunflower Oil, Fermented Soya-Bean Oil (Horse Gram Oil), Flower Seasame Oil, etc… edible oil produced in standardized quality from the domestic oil mill businesses.
(d) To have more emphasized purchasing and utilization confidently to the domestically produced good oils and clean oils be in accordance with health besides high quality having price stability to the consumer sector.
(e) To implement successively of the animal husbandry sector of the meat, fish, egg, milk production to be able to buy easily of the by-products of groundnut expeller cake, sesameျexpeller cake, sunflower expeller cake, fermented soya-bean expeller cake, flower sesameျexpeller cake, etc., which are main food raw material.
(f) To have development of the animal husbandry sector of the meat, fish, egg, milk production to be able to buy easily of the by-products of groundnut expeller cake, sesame expeller cake, sunflower expeller cake, fermented soya-bean expeller cake, flower sesame expeller cake, etc… which are main food raw material.
(g) To have development of the export cargo sector replacing import having sufficiency of the domestic consumerism.
(h) To implement organizing and knowledge contributing to the planters of the edible oil crops and oil will owners up to the utilization of seed, technological machine equipment, research and development and the modernized chemical laboratories.
(i) To conduct supporting to the national benefit development, rural area development and the deduction process of poverty.
(j) To implement continuously standing as (Non-Government) Organization which do not conduct sharing of divided which may offer the highest contribution to the social and economy of the oil mill business entrepreneurs.
(k) To implement collaboration hand in hand together with the international organizations from the domestic and State Government and the respective Ministries which can offer assistance from the multi-direction to have multi-sectors development with international standardized Myanmar Oil Mill Enterprises.
(l) To be able to solve assisting in collaboration quickly with the leadership of the association to the difficulties encountered of the Oil Mill Business Entrepreneurs within Myanmar.
Building Floor - 42, Ground Floor, 2nd Street,1St Quarter, Lanmadaw Township, Yangon.
(+95 9) 4547 55297, (+95 1) 220 945, 228 076
(+95 1) 220945,(+95 1) 228076
© 2017-2020 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper